အိုင်ပီ Changer, Unblock ဆိုဒ်များသည်ကီဝီ VPN ကိုချိတ်ဆက်မှု | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အိုင်ပီ Changer, Unblock ဆိုဒ်များသည်ကီဝီ VPN ကိုချိတ်ဆက်မှု
အိုင်ပီ Changer, Unblock ဆိုဒ်များ APK ကိုများအတွက်ကီဝီ VPN ကိုချိတ်ဆက်မှု
ကီဝီ VPN ကို - ကိုအကောင်းဆုံး VPN ကိုချိတ်ဆက်မှုကို proxy changer app ကို 2019 ။
1 ထိတွေ့ - သန်းဆက်သွယ်မှုများ၏: ဤ VPN ကို proxy ကိုန့်အသတ် app ကိုနှင့်အတူသငျသညျက်ဘ်ဆိုက် surfing သို့မဟုတ်နိုင်ငံခြား apps များ အသုံးပြု. ခံစားနိုင်။ ကီဝီ VPN ကို software ကို - ပိုမြန်အောက်ပါအားသာချက်များပိုမိုပုဂ္ဂလိက, ချောမွေ့:
✔️ Connect ကို VPN ကို IP ကိုပြောင်းအဆင်ပြေ, လွယ်ကူသည်
✔️ပိုကောင်းပိုကျကှနျများအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 200 + ဆာဗာမျိုးစုံမြန်နှုန်းမြင့်ဆာဗာများ, IP address ကို changer ထောက်ပံ့
✔️အခမဲ့နဂါး VPN ကို: 100% အခမဲ့တပ်ဆင်အခမဲ့ VPN proxy နှင့် Tor proxy ကို browser က်ဘ်ဆိုက်များပိတ်ဆို့ထားတာတွေကိုဖွအသုံးပြုနိုင်သည်
ငါ၏အ ip address ကိုဖျောက်ရန်✔️ပြောင်းလဲခြင်းအိုင်ပီနှင့် VPN ကို snap, အတု IP လိပ်စာတည်နေရာ
✔️ Unlimited VPN ကို client ကို: အဘယ်သူမျှမအသုံးပြုမှု session တစ်ခုမျှမြန်နှုန်းကန့်သတ်ခြင်းနှင့် bandwidth ကိုချိတ်ဆက်သောအခါ
✔️ VPN ကို Tor, VPN ကိုလုံခြုံရေး app ကိုအစာရှောင်ခြင်းနှင့်လုံးဝလုံခြုံ
✔️ IP address ကိုစစ်ဆေးပါ။ သင် VPN ကိုန့်အသတ် app ထဲမှာချိတ်ဆက်အသုံးပြုဖို့နေသော IP address ကိုစစျဆေးနိုငျ
ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာထံမှ applications များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကြည့်ရှုရန်✔️လွတ်မြောက်ရေး
✔️အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ Unblock proxy ကို app ကို interface ကို, Lite VPN ကိုယောဂ
ထိုမှတပါး, KiwiVPN လည်းသင်၏အင်တာနက်အတွေ့အကြုံကိုမြှင့်တင်ရန်အခြားအသုံးဝင်သော features တွေလည်းပါဝင်သည်:
+ မြန်နှုန်းစမ်းသပ်: Wi-Fi Speed ​​ကိုစမ်းသပ်ဖို့သာလျှင် 3s, သင့် upload ရော download speed ကိုစစ်ဆေးပါ။
+ Wi-Fi ကာကွယ်: ကျွန်ုပ်တို့၏အလင်း VPN ကိုဝက်ဝံအာမခံချက်လုံခြုံအိုင်ပီပြောင်းလဲနေတဲ့စဉ်အတွင်းချိတ်ဆက်နှင့်သင့်အင်တာနက်ကာကွယ်ပေးသည်။
မည်သို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ VPN ကိုပုဂ္ဂလိကအင်တာနက် access ကိုချိတ်ဆက် IP ကိုပြောင်းလဲစေနှင့်သင့်ဖုန်းတွင် firewall ကပိတ်ဆို့ဖို့
1 ။ Store မှအဆိုပါအမြန် VPN ကို app ကို Install
2 ။ VPN ကို service provider က application ကိုဖွင့်ပါ, သင် proxy server ကို VPN ကိုချိတ်ဆက်ချင်သောနိုင်ငံကိုရွေးပါ
3 ။ အဲဒီနိုင်ငံမှာမှ IP ကိုပြောင်းပေးဖို့တစ်ခုမှာထိတွေ့
ဒါကြောင့်သင်ကရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကြည့်ပျော်မွေ့နိုင်ပါ။ မှတပါး, သင်သည်လည်းအချိန်မရွေးဆက်သွယ်မှုရပ်တန့်နိုင်ပါ။ ပုဂ္ဂလိက VPN ကို proxy ကိုအွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှုလုံးဝအမည်မသိစေလို့မရပါဘူး, ဒါပေမယ့် App ကိုသင့်ရဲ့ privacy နဲ့လုံခြုံရေးတိုးပွားစေပါသည်။ VPN ကိုအိုင်ပီတည်နေရာရှာဖွေကိရိယာကိုချိတ်ဆက်သောအခါ, သငျသညျပထဝီအကွာအဝေး၏ကန့်သတ်သို့မဟုတ်ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုရှောင်ရှား, သင့်ရဲ့အထောက်အထားနဲ့တည်နေရာကိုကာကွယ်ရန်ဆာဗာဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်ဤကွီးစှာသောအတှေ့အကွုံအတူ Kiwi VPN ကိုအိုင်ပီတည်နေရာ changer application ကိုဖန်တီးရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်နေကြသည်။ သင်လှိုင်း VPN ကိုလျှောက်လွှာများအတွက်တစ်စုံတစ်ရာမှတ်ချက်ရှိပါကacomment ထားခဲ့
သင်လုံခြုံ VPN ကိုအခမဲ့ app ကိုချစ်ကြလျှင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ development team ကိုထောကျပံ့ဖို့5* ဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့မေ့လျော့ကြဘူး
အိုင်ပီ Changer, Unblock ဆိုဒ်များသည်ကီဝီ VPN ကိုချိတ်ဆက်မှု
အသီး VPN ကို - သည် သာ. ကောင်း၏ Connect ကို
သင်တို့သည်လည်းစိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည် VPN ဖမ်းယူ
21VPN - Unlimited ...
စူပါ VPN ကိုမာစတာ ...
အခမဲ့ VPN …
အစိမ်းရောင် VPN ကို -Fast ...
GeckoVPN အခမဲ့ ...